शेखर खरेल बुधबार, मंसिर ८, २०७३
'आइसल्याण्डको सर्प' जस्तो जेल जर्नल
बीपीले आफ्ना खुशी र दुःखका क्षण, आत्मग्लानि, निरीहता र प्रतिहिंसामा आफू जलेका कुरा समेत नलुकाई व्यक्त गरेको अनुभव हुन्छ 'जेल जर्नल' मा। आफूले गरेका गल्तीहरू, आफ्ना कमजोरीहरू केही लुकाउन खोजिएको छैन, सबै कुरा छर्लङ्ग पारिदिएको देखिन्छ। अभिव्यक्तिको यस्तो इमानदारी राजनीतिक नेताहरूबाट अपेक्षा गरिएको हुन्न। त्यसै हुनाले पनि जेल जर्नल एउटा उत्तमोत्तम कृति मानिएको हुनुपर्दछ।
आतिसबाजीका कारण रक्तचाप बढ्ने, एलर्जी हुने, टाउको दुख्ने, ब्रोङ्काइटिस बल्झिने, दम बढ्ने, खोकी लाग्नेलगायतका अप्रत्यक्ष असरहरूमा त मानिसहरूको ध्यानै गएको छैन।
तिहारको बेला आतिसबाजीको जोखिम जस्तै अर्को समस्या हो– खाद्य मिसावट। लोभी व्यापारीहरूले उपभोग बढ्ने चाडबाडलाई अनुचित तरीकाले कमाउने अवसर बनाउँछन्।
नेपालीका कविहरूमध्ये उम्दाउम्दा उपमा दिनेमा कविशिरोमणि लेखनाथलाई कसैले उछिन्न सकेको छैन। अचेलका नेपाली कवितामा त उपमा भन्ने चलन नै छैन, 'बिम्ब' भन्नुपर्छ। तर, उपमा या बिम्ब जे भने पनि त्यस विधामा कवि भूपि शेरचन अद्वितीय छन् भन्ने मेरो धारणाको प्रमाण प्रस्तुत गर्न यही एउटा पुस्तक, 'घुम्ने मेच' पर्याप्त छ भन्ने मलाई लाग्छ।
केदार शर्मा सोमबार, असोज २४, २०७३
राँगाको मासु नखानेबीच पनि 'बफ मोमो' लोकप्रिय हुनुका पछाडि नयाँ नाम र स्वादसँगै एउटा समृद्ध पाककलाले काम गरेको छ।
पूर्व जानकारीः यस लेखले नेपालमा राँगा–भैंसीको अनुपयुक्त ढुवानी, अस्वस्थकर बधशाला जस्ता विषय जानाजान नउठाएको हो। यो 'ठूलो खसी' को मासु; अर्थात् बफको परम्परा र प्रचलनको चर्चा हो। मासुमंसको कुरा पढ्न मन नपराउनेहरूसित अग्रिम क्षमायाचना छ।
गाईका बारेमा धेरै निबन्ध लेखियो, पढियो। तर भैंसीबारे न कतै पढियो, न त लेखियो। आज लेखिहेरौं है त?
'माधवी' को महिमा
'माधवी' उपन्यास या आख्यान लेख्नेहरूका लागि एउटा पाठ्यपुस्तक पनि हो।
यस स्तम्भमा हामीले यसअघि दुइटा उपन्यासको चर्चा गरिसकेका छौं– रुद्रराज पाण्डेको 'रूपमती' र गिरीशवल्लभ जोशीको 'वीरचरित्र' को। आज अर्को उपन्यास अगाडि सरेको छ, मदनमणि दीक्षितको प्राग्–इतिहासकालीन 'माधवी'।
मनिष झा शुक्रबार, असोज ७, २०७३
चरम राजनीतीकरण र भ्रष्टाचारग्रस्त नेपाली खेलकुदलाई बचाउने हो भने राजनीतिक संक्रमणको वहानाबाजी कुनै पनि हालतमा स्वीकार्नु हुन्न।
जुनसुकै बेथिति र विसंगतिलाई राजनीतिक संक्रमणसँगै जोड्ने र यसैको बलमा कोकोहोलो मच्चाइरहने राजनीतिक नेताका कुरा पत्याइरहने हो भने जवाफ कहिल्यै सकारात्मक आउँदैन। संक्रमणभित्रैबाट सुधार खोज्ने युवा प्रयत्न जति सघन बन्छ, सुदिनको सम्भावना नजिकिन्छ।
ज्ञानमणि नेपाल शनिबार, भदौ २५, २०७३
ज्ञानमणि नेपाल सोमबार, भदौ १३, २०७३
प्रज्वल काफ्ले शनिबार, भदौ ४, २०७३
अन्तरिक्षसम्म कवाड पुर्‍याउने अरू कोही नभई मानिस नै हुन्। कति कवाडहरू चाहिं पुराना उपग्रहहरू आपसमा ठोक्किएर बनेका हुन्। कवाड युद्धसामग्री, रकेटका मोर्टरदेखि सामान्य जस्ता लाग्ने पेन्टका टुक्राहरू जस्ता अनेकौं किसिमका हुन्छन्।
पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण र उसको घुमाइको संयोजनले गर्दा ती कवाड लामो समय पृथ्वी वरिपरि अनियन्त्रित घुमिरहन्छन्। र, सडकमा छाडा छाडिएका जनावरले ट्राफिक जाम बढाए जस्तै अवरोध गरिरहन्छन्।
शनिबार, भदौ ४, २०७३
गर्भवती महिलालाई वाक्वाकी लाग्नु सामान्य भए पनि बढी भयो भने हाइपरइमेसिसको खतरा हुन्छ।
कांग्रेसका चे (सम्झना)
पुरञ्जन आचार्य बुधबार, भदौ १, २०७३
भूविक्रम नेम्वाङ नेपाली कांग्रेसका ती क्रान्तिवीर थिए, जो लोकतन्त्र र आत्मसम्मानको लागि गर्वसाथ लड्यो र जित्यो पनि।
कागजको पेन्सिल बनाउने सुधा
शुक्रबार, साउन २८, २०७३
चार वर्षअघि उत्पादन थालिएको कागजको पेन्सिल अहिले यूरोपलगायतका विभिन्न देशमा निर्यात हुन थालेको छ। 'वुमन्स् ड्रिम्स् मल्टी सर्भिस' का महिलाको एउटा सपना पूरा भएको छ। यो सपनाको सूत्रधार हुन्, काठमाडौं, पानीपोखरीकी सुधा बस्नेत ।
समसामयिक लेख र साहित्यमार्फत महिला सशक्तीकरणका मुद्दा उठाउँदै आएकी सुधालाई एक दिन अचानक लेखेर होइन, काम गरेर मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने लागेछ। त्यसका लागि महिला लक्षित सीपमूलक काम गर्ने उपाय सुझ्यो।
उनीहरु खलङ्गा, म लागें गोठिज्यूलातिर
गमगढीबाट नेपालगन्ज झरेर विमानबाट काठमाडौं उत्रिंदा मलाई आफ्नो अनुहार अर्कै लाग्यो ।
'यताका गाईले तपाईंका तिरकाले जस्तो एउटैले १० लीटर पानीदूध दिने हैनन्, चारओटाले चार माना अमृत दिन्छन् ।'
'हाम्रा दाइभाइले कहाँ सुत्नुभो ? भनेर सोधे भने तपाईंकी बहिनी र म सँगै सुत्यौं भन्नु न है !'
शनिबार, साउन २२, २०७३
लीलानटेश्वर बरालले डराएर आफ्नो स्पष्टवादिता छाडेनन्। यो 'झ्यालबाट' ले नेपालमा नयाँ युग ल्याएको संकेत हो। त्यस किताबको प्रकाशनले ईश्वर बराललाई विद्यार्थीको तहबाट उचालेर एकाएक नेपाली साहित्यको वरिष्ठ समालोचक तथा इतिहासकारको थान्कामा पुर्‍याइदियो। त्यसपछि बरालजीले पछाडि फर्कनै परेन, उनी उत्तरोत्तर उच्चतातिर अग्रसर हुँदै गएर नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको पदसम्म सुशोभित गर्नपुगे।
डबी भगतको सम्झना
कुन्द दीक्षित विहीबार, साउन २०, २०७३
मंगलबार, साउन १८, २०७३